Ahoana ny fampidinana ny vidin'ny fividianana mpanjifa ho an'ny ROI ambony indrindra | Martech Zone
Talata, Oktobra 26, 2021 Talata, Oktobra 26, 2021 Reuben Yonatan
Raha vao manomboka orinasa ianao, dia maka fanahy ny misarika mpanjifa amin'ny fomba rehetra azonao atao, na inona na inona vidiny, fotoana, na angovo. Na izany aza, rehefa mianatra sy mitombo ianao dia ho tsapanao fa ilaina ny mampifandanja ny vidin'ny fividianana mpanjifa amin'ny ROI. Mba hanaovana izany dia mila mahafantatra ny vidin'ny fividianana mpanjifa ianao (CAC).
Ahoana no kajy ny vidin'ny mpanjifa
Raha manao kajy ny CAC dia mila mizara ny vidin'ny varotra sy ny varotra rehetra tafiditra amin'ny fahazoana mpanjifa vaovao ao anatin'ny fe-potoana voafaritra ianao. Raha toa ka tsy mahazatra anao dia handeha amin'ny CAC formula Eto:
Raha lazaina amin'ny fomba tsotra, raha nandany $10 i Karl mba hivarotra ny fitoerany voasarimakirana ary nahazo olona folo hividy ny vokatra ao anatin'ny herinandro iray, dia ho $1.00 ny vidin'ny fahazoana azy tamin'io herinandro io.
Ohatrinona ny vidin'ny mpanjifanao?
Ohatra tena tsotra io etsy ambony io. Mazava ho azy fa ao anatin'ny orinasan'ny orinasa iray, ny CAC dia sarotra kokoa:
Total Marketing - izany dia tokony hampiditra ny mpiasan'ny varotrao, ny masoivohonao, ny fanananao, ny fahazoan-dàlana amin'ny rindrambaiko, ary izay dokam-barotra na fanohanana izay ampidirinao hahazoanao vaovao mpanjifa.
Total fandaniana amin'ny varotra - tokony hampiditra ny mpiasan'ny varotrao, ny vaomierany ary ny fandaniana azy ireo.
Ny fahasarotana hafa dia ny fandrefesana araka ny tokony ho izy ny fe-potoana nahazoana ny mpanjifa. Ny fandaniana amin'ny varotra sy ny varotra ankehitriny dia tsy miteraka mpanjifa azo avy hatrany. Mila manombatombana ny dianao amin'ny fividianana salan'isa ianao… izay ahafahan'ny mpanjifa iray mahafantatra ny vokatrao mankany amin'ny toerana tena niovany. Matetika, mety ho volana na taona maro izany arakaraka ny indostria, ny tsingerin'ny tetibola ary ny fifampiraharahana.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny hampidiranao paikady miditra izay mamaritra tsara kokoa ny fomba nandrenesan'ireo vinavina momba anao, tamin'izy ireo voalohany nifandray taminao, ka hatramin'ny datin'ny fiovam-pony.
Ahoana ny fampidinana ny vidin'ny mpanjifanao
Rehefa hainao ny manao kajy ny CAC-nao, dia te hampidina izany ianao mba hahitanao tombony ara-pahasalamana avy amin'ny mpanjifa tsirairay. Ny zavatra hafa tianao hatao dia mitazona mpanjifa efa misy — Ny fahazoana mpanjifa dia mety hitentina avo fito heny noho ny fivarotana amin'ny mpanjifa efa misy, na izany aza!
Raha mila toro-hevitra bebe kokoa momba ny fanatsarana ny vidin'ny mpanjifanao, GetVoIPNy infografika eto ambany dia mampiseho paikady vaovao dimy. Ohatra, ny famoronana votoaty mahasarika sy manan-danja dia afaka manampy anao hanangana fifamatorana amin'ny mpanjifa izay hahatonga azy ireo ho any amin'ny toerana hividianany haingana kokoa. Ampio CTA mpamono olona sasany ary mety hahita mpanjifa mividy amin'ny votoaty voalohany laniny ianao!
Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny automation marketing ho tombontsoanao. Ohatra, ireo mpanjifan'ny Birchbox dia mahazo mailaka tongasoa arahin'ireo mailaka maromaro momba ny toro-hevitra momba ny hatsaran-tarehy sy ny hafetsena. Maro amin'ireo olona ireo no tsy mbola nividy akory, fa ny orinasa dia manolotra sanda maimaim-poana be dia be mialoha. Azonao atao ihany koa ny mampiasa chatbots, mailaka automatique manokana ary fanentanana media sosialy hanamafisana ny fahombiazany.
Afaka mahita ireto sy toro-hevitra hafa eto ambany ianao. Amin'ny fahafantarana sy fanatsarana ny CAC-nao, dia ho afaka hahita fiverenana bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola ianao, ary zavatra tsara hojerena foana izany!
Tags: vidin'ny fahazoanaAffiliate-barotraprograma afilianabirchboxCACcac formulakajy cacContent Marketingfanatsarana ny tahan'ny fiovam-povidiny isaky ny fahazoanaCrofahazoana mpanjifaraikipohy momba ny vidin'ny mpanjifafitazonana ny mpanjifaraikipohygetvoipny fomba kajy cacmanatsara ny tahan'ny fiovam-pomanatsara ny croautomation marketingfandaniana ara-barotraisan'ny mpanjifa azoretargetingfandaniana amin'ny varotra
Reuben Yonatan no mpanorina sy tale jeneralin'ny GetVoIP, loharano fampitahana VoIP izay manampy ny orinasa hahatakatra sy hisafidy vahaolana momba ny fifandraisana ara-barotra ho an'ny filany manokana. Reuben dia manampy ny SMB hampifanaraka ny paikadin'ny fandraharahana amin'ny kolontsaina ary hanatsara ny fotodrafitrasa ankapobeny. Araho izy ao amin'ny Twitter @ReubenYonatan